चिकित्सकमाथि बिरामीलाई यातना दिएको आरोप, ‘बिमाकार्ड देखाउँदा उठबस गराए’ – Health Post Nepal
२०७५ फागुन २१ गते १८:२७
‘२० पटक उठबस गर’ यो वाक्य झट्ट सुन्दा लाग्छ, पहिले–पहिले कुनै विद्यालयको शिक्षकले गल्ती गरेबापत विद्यार्थीलाई दिने गरेको सजाय हो । तर, यहाँ उद्धृत गरिएको वाक्यांश कुनै दोषी विद्यार्थीलाई शिक्षकको निर्देशन नभई एउटा चिकित्सकको बिरामीमाथिको उर्दी हो । यद्यपि, पछिल्लो समय बढ्दै गएको चेतना र कानुनी निषेधका कारण शिक्षकले विद्यार्थीलाई समेत यस्तो निर्देशन गर्ने प्रचलन बन्दप्रायः भइसकेको छ ।
चट्याङमा परी घाइते भएका राजापुर नगरपालिका–४ बर्दियाका विकास जिसीलाई सुरुमा उपचारका लागि भेरी प्रादेशिक अस्पताल नेपालगन्जमा भर्ना गरिएको थियो । तर, त्यहाँ डाक्टरको अमानवीय व्यवहारले हैरानी खेप्नुपरेका कारण अस्पतालमा राख्न सक्ने अवस्था नभएपछि थप उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको बिरामीका दाइ तेजेन्द्रध्वज जिसी बताउँछन् । ‘भाइलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं लिएर आएको छु, भोलि मंगलबार टिचिङ अस्पतालमा चेकजाँचका लागि लैजान्छु,’ तेजेन्द्रले फोनसम्पर्कमा भने ।
३ फागुनमा चट्याङमा परी घाइते भएपछि उपचारका लागि भेरी प्रादेशिक अस्पताल नेपालगन्ज ल्याइएका जिसीलाई उपचारका क्रममा अस्पतालका मुटुरोग विशेषज्ञ डा. कृष्णप्रसाद अधिकारीले शारीरिक र मानसिक यातना दिएको आरोप बिरामीपक्षको छ । डा. अधिकारीकै यातनाका कारण अस्पताल बस्ने वातावरण नभएकाले १२ फागुनमा आफैँले डिस्चार्ज मागेर बिरामीलाई घर लगेको दाइ तेजेन्द्रध्वजले बताए । ‘डाक्टरलाई समाजमा भगवान्को दर्जा दिएर त्यसै रूपमा मान्दै आइएको छ,’ तेजेन्द्रले भने, ‘तर, अस्पतालमा २० पटक उठबस गराउने डा. अधिकारीको व्यवहारले त्यो विश्वासलाई झुटो साबित गरेको छ ।’
बिमाकार्डको प्रयोग गरेको बिल देख्नेबित्तिकै डा. अधिकारीले रिसाउँदै भनेको उद्धृत गर्दै तेजेन्द्रले भने, ‘चट्याङ पर्यो भनेर फ्रीमा उपचार गर्न आ’को हो ? तँ ३–४ हजारको क्याबिनमा बस्ने, के यो पनि फ्री हो ? इको फ्रीमा गराउने तेरो त्यो क्याबिनमा बस्ने के हैसियत छ ? यो सिस्टम मलाई मनपरेन ।’ डा. अधिकारीले नराम्ररी हपारेको दाइ तेजेन्द्रको गुनासो छ ।
भाइ चट्याङमा परी घाइते भएपछि तेजेन्द्रले उनलाई भेरी प्रादेशिक अस्पतालको इमर्जेन्सीमा पुर्याए । अस्पतालले उनलाई भर्ना गरेर उपचार थाल्यो । भर्ना भएको भोलिपल्ट उनी क्याबिनमा सारिए । ३–४ दिनपछि ‘मुटुको इको गर्ने’ भनेर डाक्टरले उनको पर्चामा लेखिदिएका थिए । बिरामीको स्वास्थ्यबिमा भएका कारण इको गर्दा बिमा सुविधाअनुसार उनले पैसा तिरेनन् र नियमानुसार बिमाकार्डमार्फत बिल कटाए । इकोको रिपोर्ट लगेर उनले मुटुरोग विशेषज्ञ डा. कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई देखाए । बिमाकार्डको प्रयोग गरेको बिल देख्नेबित्तिकै डा. अधिकारीले रिसाउँदै भनेको उद्धृत गर्दै तेजेन्द्रले भने, ‘चट्याङ पर्यो भनेर फ्रीमा उपचार गर्न आ’को हो ? तँ ३–४ हजारको क्याबिनमा बस्ने, के यो पनि फ्री हो ? इको फ्रीमा गराउने तेरो त्यो क्याबिनमा बस्ने के हैसियत छ ? यो सिस्टम मलाई मनपरेन ।’ डा. अधिकारीले नराम्ररी हपारेको दाइ तेजेन्द्रको गुनासो छ ।
त्यसपछि १० फागुनमा फेरि डा. अधिकारीसँग मुटुको जाँच गराउन पुगेका बिरामी जिसीले यसपटक गाली मात्र खाएनन्, शारीरिक यातना नै बेहोर्नुपर्यो । ‘यसलाई त उहिले घर जान भनेको, अहिलेसम्म यहीँ छ ?,’ डा. अधिकारीको प्रस्तुति र व्यवहार उद्धृत गर्दै तेजेन्द्रले भने, ‘२० पटक उठबस गर, शारीरिक एक्सरसाइज होला ।’ दुई–तीनपटक उठबस गर्दैमा भाइ ढलेपछि आफूले उठाएको तेजेन्द्रले बताए । ‘यसले बहाना गरेको हो, यो डिप्रेसन भएको बिरामी हो, भन्दै जथाभावी बोलेर डा. अधिकारीले यातना दिए,’ तेजेन्द्रले भने ।
डाक्टरको दुव्र्यवहार देखेरै आफूले डिस्चार्ज मागेर १२ फागुनमा भाइलाई अस्पतालबाट घर लगेको उनले बताए । उनले डा. अधिकारीविरुद्ध अस्पताल प्रशासनमा कारबाहीका लागि निवेदनसमेत दिएको बताए । ‘मैले भोलिका दिनमा आफूले जस्तो व्यवहार अरु बिरामीले सहनुनपरोस् र सम्बन्धित डाक्टरमाथि कारबाही होस् भनेर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रूपानन्द अधिकारीलाई निवेदन दिएँ,’ तेजेन्द्रले भने, ‘तर, उहाँले निवेदन दर्ता नगरी आफैसँग राख्नुभयो ।’ मेसु डा. रूपानन्दले पहिले सम्बन्धित डाक्टरसँग घटनाबारे बुझ्ने बताएको तेजेन्द्रको भनाइ छ ।
घटनाबारे सोधिएको प्रश्नमा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. अधिकारीले भने, ‘मैले अस्पतालभित्र रहेका बिमाअभिकर्तासँग उहाँको भेट गराइदिएको हो, बाँकी मलाई थाहा छैन । उहाँको एउटा निवेदन आएको छ, मैले दर्ता गरिसकेको छु ।’ सम्बन्धित डा. अधिकारी अहिले मुलुकबाहिर भारतको मुम्बईमा कन्फरेन्सका लागि गएकाले सत्यतथ्य बुझ्न बाँकी रहेको बताउँदै उनले भने, ‘उहाँ फर्केपछि म बुझ्नेछु ।’
बिरामीको सम्पूर्ण भरोसाको केन्द्रका रूपमा रहेका चिकित्सकको हातमै बिरामीको स्वास्थ्य हुने भएकाले चिकित्सकले आफ्ना अशोभनीय व्यवहार र आचरण सुधार्नुपर्ने उपचारका लागि अस्पताल आइपुगेका अर्का एक बिरामीले बताए ।
डाक्टरविरुद्ध मानवअधिकारवादी संस्थामा निवेदन
यसैबीच दाइ तेजेन्द्रध्वजले आफ्ना बिरामी भाइमाथि डा. अधिकारीले अमानवीय व्यवहार गरेकाले उनीविरुद्ध छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै मानव अधिकारवादी संस्था तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड एलायन्स) उपप्रादेशिक कार्यालय नेपालगन्जमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
थर्ड एलायन्स उपप्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख आलम खानले बिरामीको निवेदन कार्यालयमा दर्ता भएको जानकारी दिए । ‘हामी त्यस्तो अमानवीय व्यवहारको घोर निन्दा गर्दछौँ,’ खानले भने, ‘संलग्न डाक्टरमाथि अविलम्ब कारबाहीका लागि छानबिन सुरु गर्छौं ।’
भेरी प्रादेशिक अस्पताल